Lix ku dhimatay qashinqub soo dumay - BBC News Somali
Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay toban kalena waa ay dhaawacmeen kaddib markii uu qashin qub noqday sida buuraha uu dusha ka maray afartan guri oo ku yaalo duleedka caasimada dalka Sri Lankan ee Colombo.
Kooxaha badbaadada iyo ciidamada dalka Sri Lankan ayaa qufaya qashin qubka iyagoo weli baadigoobaya dadka ku hoos jira qashin qubkani soo dumay oo dheerarkiisu lagu qiyaasay 90 mitir.
Qashin qubkani ayaa muddooyinkii u dambeeyay kasoo rogmaday halkii ay yaaleen kaddib roobab mahiigaan ah oo halkaasi ka da'ay, waxaana shilkani uu dhacay xili shacabka dalkaasi Sri Lankan ay u dabaal dagayeen maalinta dhaqanka Sinhala iyo sannadka cusub ee dalkaasi.
Barlamaanka dalka Sri Lankan ayaa dhawaan la horgeeyay warbixin muujineysa in qashin dhan sedex iyo labaatan milyan oo tan oo yaala deegaanka Kolonnawa ay khatar caafimaad oo aad u daran ku hayaan shacabka degan halkaasi.
Yaa ku aasnaa qabuuraha 3,000 oo sano jira ee laga helay Masar?
34 Daqiiqadood ka hor
Atariishadii "wadaadda isu baddashay" oo farriin soo dirtay
Kiisaska Coronavirus ee daafaha caalamka
16 Jannaayo 2021
Maxay tahay sababta ay Gedo xudunta ugu noqotay khilaafka doorashada?
19 Disembar 2020
Shanta arrin ee khilaafka ugu weyn ka taagan yahay
16 Disembar 2020
Kareena Kapoor: 'Sayf Cali Khan wuxuu nolosheyda ku soo kordhiyay nabad iyo xasillooni'
14 Disembar 2020
"Ma doonayno in dumarkeena ay dhallaan ilmo muslimiin ah"
17 Disembar 2020
Maxaad ka taqaannaa Amiirka jacaylka iyo sida uu ku hantay taageerada caalamka?
18 Disembar 2020
Magacyada iyo xilalka mas'uuliyiintii ku dhintay qarixii Gaalkacyo
Madaxweyne Muuse Biixi: 'Kenya kama yeeli doono in ay noo adeegsato Soomaaliya'
15 Disembar 2020
'Qof walba waxaa canshuuro Al-Shabaab, si toos ama si dadban'
Dembiyo dagaal miyaa ka dhacay gobolka Tigray?
Mid baa soo galaya, mid kalaa baxaya: Sidee ayay u dhacdaa xil wareejinta Aqalka Cad?